ကြိုမှာလား ကျိုမှာလား-How ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကြိုမှာလား ကျိုမှာလား-How ?	16
ကြိုမှာလား ကျိုမှာလား-How ?
Posted by ရွာချစ်သူ on Mar 22, 2015 in Creative Writing | 16 comments
အရပ်သား တဲ့ …
လူယောင်ဆောင်တဲ့ ဘီလူး …
အစွယ် ငေါငေါ သာတကား။
၂၀၁၅ မတ် ၃၊ ညသန်းကောင်ကျော်
ကျုပ်က စာမရေးတတ်ဘူး။ ဖတ်တာတော့ ဖတ်တတ်တယ်။
ရွာဆိုတာလေးကို ကြိုက်လို့ ဝင်လာတာ။
ဒီရွာကို ရှာတွေ့တာ မကြာသေးဘူး။
ဒီနေ့မတိုင်ခင် ၅ရက်လောက်က သိချင်တာလေးရှိလို့ ဂူဂဲမှာ ရှာရင်း ဒီရွာလေးကို တွေ့ခဲ့တာ။ သုံးလေးရက်လောက် စောင့်ကြည့်နေမိပြီးမှ ကျုပ်လည်း ရွာသားဖြစ်ချင်လာလို့။
ကျုပ်ကြိုက်တဲ့ ကိုစွမ်းရည်ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ပြန်တင်လိုက်တယ်။
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်က စာရေးတတ်သူမဟုတ်လေတော့ သူများရေးတာထဲက
ရွာ ချစ်သူ has written 1 post in this Website..
View all posts by ရွာချစ်သူ →	Blog
ရွာချစ်သူ says: အခုထိလည်း ကြိုတဲ့သူတယောက်မှ မတွေ့သေးပါလား။
ခင်ဇော် says: ကြိုဆိုပါတယ်
sunday က လူနည်းးလို့
naywoon ni says: ကြိုလဲကြိုမယ်​ ။ ကျိုလည်း ကျိုမယ်​ဗျာ ။ ဟုတ်​လား ။ ရွာသားတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​လာမှ​တော့ အားလုံး လက်​​ရေတစ်​ပြင်​တည်းပါပဲ ။ ဟုတ်​တယ်​​နော်​ ရွာသားများ ။ ကိုယ့်​လူ​တွေကိုယ်​လဲ ပြန်​​မေးကြည့်​ရ​သေးတယ်​ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဆရာအော်ပီကျယ်က သူတို့ကာတွန်းရေးသူဘ၀မှာ လက်ရေးကြည့်ပြီး ကာတွန်းဆွဲတတ်သူကို ရှာပုံတော်ဖွင့်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောတယ်။
ခုလည်း ကြိုမှာလား ကျိုမှာလား ဆိုကတည်းက သတ်ပုံဂိုဏ်းသားဖြစ်ရမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ကြိုကျိုပါအိ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .၀မ်းမလီးဝဲလ်ကမ်းပါဗျာ…မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ကဗျာလေးက တိုတိုနဲ့ထိမိပါဘိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ… Welcome ပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်….။ Sunday ဆို လူနည်းတတ်တာပါ….။ တင်သမျှစာတွေလဲ ကြည့်ပါမယ်…။ ကိုယ်တိုင်လဲ ရေးပါ…။ အားပေးလျှက်…
ဗုံဗုံ says: တူကဖြင့်မုန့်လေးဘာလေးနဲ့မလာဘဲနဲ့
မကျိုတဲ့သူအပြစ်လား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ကျိုမှာပါ…အရေ (အရည်) ပျော်စေရမယ် စိတ်ချ
တောင်ပေါ်သား says: ကျိုဦးမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: ကျုပ်ကိုတော့ ဆရာစွမ်းအောက်က ကဗျာလေးပေးထားရဲ့..
မျက်လုံးအတုနဲ့ လူအိုပါ ။
လူသားအတု မဟုတ်ဘူး။ မောင်စွမ်းရည်
၂၀၁၅၊ မတ် ၁၃
Mr. MarGa says: ကြိုကြိုတင်တင် ပြောပြီးဝင်လာတာမဟုတ်တော့
ရွာချစ်သူ says: ကြိုကြတာတွေ့တော့ ဝမ်းသာတယ်ဗျို့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကြိုပါတယ်ချင့်.. သာကူကျိုရင်လည်း ခေါ်ကျွေးပါ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ကိုကိုလာမယ်ဆိုလို့ ကာဖီရေ တွေ ကျိုလို့ ဆိုတဲ့ သီချင်း သတိရမိပါတယ်။